Iiflethi zeBanana Leaf- Kittul Room-Hikkaduwa - I-Airbnb
Iiflethi zeBanana Leaf- Kittul Room-Hikkaduwa
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAmila And Hannah
UAmila And Hannah yi-Superhost
* Ngoku unxibelelwano lwe-intanethi lwe-Fylvania * Iflethi ekhanyayo enevaranda negumbi lokuhlambela elivulekileyo, kunye nepuli esetyenziswa nangabanye abantu ephambi kwebala le-cinamon kwindawo epholileyo eluhlaza. Le yindawo efanelekileyo apho unokuzonwabisa khona ngobomi baselwandle iHikkaduwa, kwindawo epholileyo.
Le yenye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezine ezizimiseleyo. Indawo ekufutshane nebala elihle le-cinamon, apho usoloko ubona iintaka neenkawu zetropiki, kukuhamba nje imizuzu eyi-15 okanye ukuhamba ngephenyane ukusuka ekupheleni kweNarigama ngaselunxwemeni lweHikkaduwa.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex ikwicomplex kwaye inebhalkoni enendawo yokulala yosuku ejonge igadi,
Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu, inethi yeengcongconi nefeni, idesika kunye newodrophu.. iifestile ezinkulu zijonga ngaphandle ehlathini ngasemva.
Igumbi lokuhlambela elivulekileyo lalamaxesha, elineshawa enamanzi ashushu nebhafu, ungabukela iinkwenkwezi nemililo ebusuku ngoxa uzipholele, neshawa elangeni!
Ikhitshi labucala elinebhari yesidlo sakusasa, igesi/ibhotile yombane, ifriji engenayo ifriji nezixhobo zokupheka.
*nceda uqaphele * Ngenxa yemeko eqhubekayo yokungabikho kwegesi eSri Lanka, amaxesha amaninzi kunzima ukutshintsha iibhotile zegesi, nceda ube nomonde kuthi ngeli xesha njengoko siza kusoloko sisenza konke okusemandleni ethu ukukufakela ezinye izinto.
Le gadi isetyenziswa nangabanye abatyeleli ibe yindawo entle, enomthunzi yokuphumla- inendawo yokuphumla enetafile neendawo zokuhlala, kunye nepuli esetyenziswa nangabanye abantu kwigadi engasemva.
Kukho indawo yokupaka ngaphakathi kwindawo ebiyelweyo, kwaye kukho nendawo yokupaka imoto encinci ngaphandle kwendlu.
Nceda uqaphele ukuba ezi flethi okanye izindlu ezikwicomplex zenzelwe abantu abadala abayi-2 ababelanayo endaweni yeentsapho. Ngenxa yeso sizathu phakathi kwabanye, sicinga kuphela ngokuthatha abantwana kunye neentsana kwiimeko ezithile apho sicinga ukuba ingasebenza khona. Nceda uqhagamshelane nathi ngaphambi kokubhukisha ukuba uhamba nomntwana, enkosi.
4.94 · Izimvo eziyi-120
I-Hikkaduwa yaziwa ngolwandle lwayo kunye nemisebenzi eyahlukeneyo esekwe emanzini-ukusuka ngasekupheleni kuka-Okthobha ukuya kuthi ga ngoMatshi, iba yindawo ethandwayo yokusefa kunye nento kwinqanaba ngalinye-ukusuka kwabaqalayo ukuya phambili. (Buza ukuba ungathanda na izifundo okanye uncedo ngokuqeshwa kwebhodi!) Ngeli xesha unokuntywila, i-snorkel kunye nebhodi yokuvusa. Kukho i-lagoon enhle ekufutshane, eneziqithi ezincinci kunye netempile, kwaye sikwimeko entle yokutyelela iGalle kunye nenqaba yayo yembali. Imisebenzi yezandla yasekuhlaleni, umsebenzi wesikhumba, amatye enyanga kunye namanye amatye anqabileyo anokuthengwa apha. Ukuba ufuna nayiphi na ingcebiso kuhambo sinokukucebisa ngokulula malunga nendlela yokwenza uninzi lokuhlala kwakho!
Umbuki zindwendwe ngu- Amila And Hannah
Singabantu abanobuhlobo kwaye enye yezinto esizithandayo nge-Air bnb kukudibana nabantu abavela kwihlabathi liphela-siyavuya ukuchitha ixesha kunye nawe (sihlala sabelane ngokutya njl.njl!) kwaye siyaqonda ukuba ufuna indawo yakho. kunye nemfihlo. Sifumaneka nanini na (ngokufanelekileyo) kuyimfuneko kwaye siyavuya kakhulu ukunika iingcebiso kunye noncedo ngohambo lokucwangcisa.
Singabantu abanobuhlobo kwaye enye yezinto esizithandayo nge-Air bnb kukudibana nabantu abavela kwihlabathi liphela-siyavuya ukuchitha ixesha kunye nawe (sihlala sabelane ngokutya…